လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် China Manufacturers & Suppliers & Factory
လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 12 များအတွက်စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် ထုတ်ကုန်များ)
ဂိတ်ဆွဲယူလျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်သံမဏိ ပိုမိုတာရှည်ခံတံခါးကိုအောင်အထောက်အပံ့ plunger နှင့်အတူနှစ်ဆလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘားသို့အထူးမှိုမှတဆင့်ဂန္ထဝင်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါး 2nd ပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ဂန္ထုတ်ကုန်ရိုးရှင်းပြီးကြော့အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်တံခါးကိုရုပ်ရှင် 38 × 25 ကို အသုံးပြု. (အထူ 1mm) သံမဏိပြွန် အကြမ်းခံ။...
လျှပ်စစ်လျှောသည့်ကားလမ်းကိုမြို့တံခါးဝခေါက်သံခြံစည်းရိုးစီရင် လျှပ်စစ် r ကို etractable တံခါးကိုလမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြားဖြတ်နှင့်ဖြန့်ချိထိန်းချုပ်ဖို့တံခါးကိုဖွင့်ပွဲ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်သောတံခါးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။...
အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်သံမဏိပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခေါက်တံခါး လျှပ်စစ် r ကို etractable တံခါးကိုလမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြားဖြတ်နှင့်ဖြန့်ချိထိန်းချုပ်ဖို့တံခါးကိုဖွင့်ပွဲ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်သောတံခါးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။...
အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်လျှော လျှပ်စစ် r ကို etractable တံခါးကိုလမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြားဖြတ်နှင့်ဖြန့်ချိထိန်းချုပ်ဖို့တံခါးကိုဖွင့်ပွဲ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်သောတံခါးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။...
အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါးကိုအဓိကအားသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကို arc-shaped ဒီဇိုင်းတံခါးကို၏အပေါ်ဆုံးအဘို့မွေးစားနှင့်တံခါးကိုမော်ဒယ်အတွက်လှပသောဖြစ်ပြီး, ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်စုံစုံနှင့်ကြော့သည် ဖြစ်. ,...
လျှပ်စစ်သံမဏိပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခေါက်တံခါး လျှပ်စစ် r ကို etractable တံခါးကိုလမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြားဖြတ်နှင့်ဖြန့်ချိထိန်းချုပ်ဖို့တံခါးကိုဖွင့်ပွဲ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်သောတံခါးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။...
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူအလိုအလျောက်လျှပ်စစ်လူပျိုနှစ်ချက် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါးကိုအဓိကအားသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကို arc-shaped ဒီဇိုင်းတံခါးကို၏အပေါ်ဆုံးအဘို့မွေးစားနှင့်တံခါးကိုမော်ဒယ်အတွက်လှပသောဖြစ်ပြီး, ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်စုံစုံနှင့်ကြော့သည် ဖြစ်. ,...
High Quality လျှပ်စစ် Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်
High Quality လျှပ်စစ် Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် လျှပ်စစ် r ကို etractable တံခါးကိုလမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြားဖြတ်နှင့်ဖြန့်ချိထိန်းချုပ်ဖို့တံခါးကိုဖွင့်ပွဲ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်သောတံခါးကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။...
High Quality လျှပ်စစ် Trackless ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်
လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် လျှပ်စစ် Trackless ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် Access ကိုလျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် သံမဏိပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခေါက်တံခါး လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်စျေးဆွဲယူ Trackless လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါး